Mogadishu Journal » Diyaarad iyo saraakiil Imaaraadka u dhashay oo lagu xayiray Boosaaso
Diyaarad iyo saraakiil Imaaraadka u dhashay oo lagu xayiray Boosaaso
Mjournal :-Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee magaaladaasi ay ku xayireen garoonka diyaaradaha Boosaaso diyaarad laga leeyahay wadanka Isutagga Imaaraadka Carabta.
Diyaaradan ayaa loo diiday inay ka duusho garoonka diyaaadaha kadib markii ay diideen in la baaro boorsooyinka ay wateen qaar kamid ah ciidamada Imaaraadka oo tababara ciidamada maamul goboleedka Puntland.
Majiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee la xiriira xayiraada diyaaradan loo geystey.
Xiriirka dowlada Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa sii xumaanayay tan iyo markii dhowaan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho lagu qabtay lacag malaayin doolar ah taasoo sababtay in labada dal ay hadalo kulul isweydaarsadaan.
Wararkii ugu danbeeyay ee Ololaha doorashada guddoonka Golaha Shacabka
Maamulka Puntland oo fasaxay diyaaradii lagu xayiray garoonka Boosaaso